Lapha i-THEMAX izokwethulela izindlela eziningana ezihlanganisiwe zamabhande wokuhambisa injoloba. Ibhande elihambayo kufanele lixhunywe ku-loop ngaphambi kokuthi lisetshenziswe. Ngakho-ke, ikhwalithi yokuhlanganiswa kwebhande elihambayo ithinta ngqo impilo yesevisi yebhande elihambayo nokusebenza okuhamba kahle kolayini wokuhambisa. Imvamisa izindlela ezisetshenziselwa amalunga ebhande lokuhambisa zifaka phakathi amalunga womshini, amalunga aboshwe ngamakhaza kanye namajoyini ashisayo.
I.Conveyor belt mechanical mechanical joint method:
Ngokuvamile kubhekiswa ekusetshenzisweni kwamalunga ebhande ebhande. Le ndlela ehlangene ilula futhi iyonga, kepha ukusebenza ngokuhlanganyela kuphansi futhi kulula ukulimaza, okunomthelela othile empilweni yesevisi yemikhiqizo yebhande elihambayo. Ku-PVC ne-PVG wonke amalunga ebhande elihambisa ilangabi le-antistatic, ngokuvamile imikhiqizo engaphansi kwebhande le-8 isebenzisa le ndlela yokuhlangana.
II.Conveyor ibhande indlela yokuhlangana ebandayo:
Kusho ukuthi isetshenzisiwe ukunamathela okubandayo kwamalunga. Le ndlela yokuhlanganyela isebenza kahle futhi iyonga kunezingxube zomshini, futhi kufanele ibe nomphumela ohlanganyelwe ongcono. Kodwa-ke, ngombono osebenzayo, ngoba izimo zenqubo zinzima kakhulu ukuzazi, futhi ikhwalithi yokunamathela inethonya elikhulu ejoyintini. Ngakho-ke ayizinzile kakhulu.
III.Conveyor ibhande ezishisayo vulcanization indlela ngokuhlanganyela:
Ukuzijwayeza kukhombise ukuthi kuyindlela ekahle yokuhlanganyela, engaqinisekisa ukusebenza ngokuhlangana okuphezulu, futhi futhi izinzile kakhulu. Impilo yesevisi yokujoyina nayo isinde kakhulu futhi kulula ukuyazi kahle. Kodwa-ke, kukhona ukungalungi okufana nenqubo enenkinga, izindleko eziphakeme nesikhathi sokusela eside, njll.
Emkhakheni webhande le-rubber conveyor belt, ukusikwa kwebhande kuhlale kuyikhanda elikhulu nomenzi wezinkinga. Kepha ngokusebenza kanzima ocwaningweni nasekuthuthukisweni, i-THEMAX ithola isisombululo esihle somkhiqizo wayo. Manje i-THEMAX iqhubeka nokusiza abangaphakathi ekuxazululeni inkinga yokuhlangana kanye nokuphindaphinda.